सिंहदरबार अगाडि आफ्ना नागरिकको प्रदर्शनबारे बोल्यो चिनियाँ दूतावास ! – Wow Sansar
मुख्य पृष्ठ /News/सिंहदरबार अगाडि आफ्ना नागरिकको प्रदर्शनबारे बोल्यो चिनियाँ दूतावास !
सिंहदरबार अगाडि आफ्ना नागरिकको प्रदर्शनबारे बोल्यो चिनियाँ दूतावास !
काठमाडौं : चिनियाँ दूतावासले सिंहदरबार अगाडि आफ्ना नागरिकको प्र’दर्शनबारे नेपाल प्रहरीसँग सम्पर्कमा रहेर छलफल भइरहेको जनाएको छ। प्रहरीमाथि जा’इलाग्ने चार जना वि’रुद्ध मु’द्दा चलाउने तयारी पछि दूतावासले शुक्रबार राति पौने ११ बजे प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी उक्त घ’टनाप्रति जानकार रहेको जनाएको हो।
चिनियाँले नेपालको कानुन पालना गर्नुपर्ने पक्षमा चीन वकालत गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उचित मागबारे भने नेपाल सरकारले ध्यान दिने भन्ने विश्वास लिएको जनाइएको छ । उसले आफ्ना नागरिक अन्तर्राष्ट्रिय उडान लामो समय स्थगन हुँदा घर जान हता’रिएको जनाएको छ। नेपालमा रहेका चिनियाँको संख्या ठूलो रहेकाले चार्टर्ड उडानमा जान नपाएकाहरू जाने प्रयत्नमा रहेका जनाइएको छ।
चीनले ३ सय ४० जनालाई लगिसकेको छ। सीमित उडानका कारण धेरै चिनियाँ अझै नेपालमा रहेको जनाउँदै दूतावासले आफ्ना नागरिकलाई संयम हुन भनेको छ। महामारीको यो कठिन घडीमा यस्ता घ’टनालाई संयुक्त रूपमा सम्हाल्दै अघि बढ्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
भारतीय सेना प्रमुखलाई प्रधानमन्त्रीको चेतावनी : नेपाल विश्व इतिहासमै गुलाम नभएको मध्येको एक राष्ट्र हो, हामी बरु ज्यानको बाजी थापेर लड्न तयार हुन्छौँ तर झुक्दैनौँ, भूमि हामी फिर्ता लिएरै छाड्छौँ”
लकडाउनमा दिव्याले ससुरा, बहिनी र २ छोराको ह’त्या पछि गरिन् आ’त्मह’त्या